IDuteronomi 20 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 Xa uthe waphuma waya kulwa neentshaba zakho, waza wabona amahasheamahashe neenqwelo zokulwa, abantu abaninzi kunawe, uze ungaboyiki; ngokuba unawe uYehova uThixouThixo wakho, owakunyusayo ezweni laseYiputa.
2 Kothi ke, xenikweni nithe nasondela ekulweni, afike umbingeleli, athethe ebantwini, athi kubo, Yiva, Sirayeli!
3 Nisondele namhla ekulweni neentshaba zenu; mayingathambi intliziyo yenu, musani ukoyika, musani ukuphakuzela, musani ukungcangcazela ebusweni bazo;
4 ngokuba uYehova uThixouThixo wenu uhamba nani, ukuba anilwele kwiintshaba zenu, anisindise.
5 Ababhali bothetha ebantwini, bathi, Ngubani na umntu owakhe indluindlu entsha, akayisungula? Makahambe abuyele endlwini yakhe, hleze afe emfazweni, isungulwe mntu wumbi.
6 Ngubani na umntu otyele isidiliyaisidiliya, akadla kuso? Makahambe abuyele endlwini yakhe, hleze afe emfazweni, sidliwe mntu wumbi.
7 Ngubani na umntu ogane umfazi, akamzeka? Makahambe abuyele endlwini yakhe, hleze afe emfazweni, azekwe mntu wumbi.
8 Boqokela ababhali bathethe ebantwini, bathi, Ngubani na umntu owoyikayo, ontliziyo ithambileyo? Makahambe abuyele endlwini yakhe, inganyibiliki intliziyo yabazalwana bakhe, njengentliziyo yakhe.
9 Kothi bakugqiba ababhali ukuthetha ebantwini, bamise abathetheli bemikhosi bokukhokela abantu.
10 Xa uthe wasondela emzini, usiya kulwa nawo, womemeza uxolo kuwo;
11 kuthi, ukuba uthe wakuphendula ngoxolo wakuvulela, bonke abantu abafunyenwe kuwo babe ngabafakwa uviko, bakukhonze.
12 Ke ukuba uthe awaxola nawe, wesuka wenza imfazweimfazwe nawe, wowungqinga wena.
13 Ukuba uthe uYehova uThixouThixo wakho wawunikela esandleni sakho, woyibulala yonke into eyindoda kuwo ngohlangothi lwekrele;
14 kodwa abafaziabafazi, nabantwana, neenkomo, neento zonke ezithe zabakho kuloo mzi, amaxhoba awo onke, wowathimbela kuwe, uwadle amaxhoba eentshaba zakho akunikileyo uYehova uThixouThixo wakho.
15 Uya kwenjenjalo kuyo yonke imizi ekude kakhulu kuwe, engeyiyo yona imizi yezi ntlanga.
16 Kodwa emizini yezi zizwe akunikayo uYehova uThixouThixo wakho ukuba ibe lilifa, uze ungasindisi nanye into ephefumlayo.
17 Wowasingela phantsi kanye amaHeti, nama-Amori, namaKanan, namaPerizi, namaHivi, namaYebhusi, njengoko wakuwiselayo umthethoumthetho uYehova uThixouThixo wakho;
18 ukuze banganifundisi ukwenza amasikizi abo onke abawenze koothixo babo; none kuYehova uThixouThixo wenu.
19 Xa nithe ke nenza iintsukuiintsuku niwungqingile umziumzi, nisilwa nawo ukuba niwuhluthe, uze ungayonakalisi imithiimithi yawo ngokuyixabela ngezembe; kuba uya kudla kuyo. Uze ungayigawuli; kuba umthiumthi wasendle ungumntu na, ukuba ungqingwe nguwe?
20 Ngumthi owaziyo ukuba asimthi udliwayo wodwa owowonakalisa, uwugawule, wakhe izinto zokungqinga umziumzi olwa nawo, ude uwe.